Etu esi lelee Netflix na Raspberry Pi | Akụrụngwa n'efu
Rasberi Pi na-arụ ọrụ maka ọtụtụ dị ka minipc ma ọ bụ kọmputa inyeaka. Mana ndị na-ekwujọ ya na-ekwukarị na ọ bụghị ezigbo akụrụngwa zuru oke maka ụfọdụ arụmọrụ dị mkpa. Lee, anyị ga - agwa gị otu ị ga - esi rụọ ọrụ ma ọ bụ sọftụwia siri ike.
N'ime nkuzi a, anyị ga-agwa gị otu esi ekiri ma jiri Netflix, yana ọrụ vidiyo ndị ọzọ na-asọ asọ na Netflix, na Raspberry Pi na-enweghị iji ngwaike ọ bụla ma ọ bụ jiri ogwe osisi dị ka onye nzuzu ahịa (nke ọma, ụfọdụ usoro ma ọ bụrụ na nke na-eji nzuzu ahịa ọrụ nwere Netflix on Rasberi Pi), nke anyị na-adịghị mkpa kpọmkwem a utu Pi osisi ma ọ bụla ọzọ ngwaike na ike ga-jikọọ na a na ihuenyo.
Netflix bụ ọrụ ntanetị mara mma n'ihi ọdịnaya ya na ọnụahịa ya / ogo ya, mana anyị ga-ekwukwa na ọ na-egbochi ya ma na-achọ ihe ma ejiri ya na ntanetị dị iche iche. Enweghị ike itinye ngwa mkpanaka ya na smartphones ma ọ bụ mbadamba na mgbọrọgwụ yana Gnu / Linux enweghị ike iji ngwa ya mee ihe n'ihi ụfọdụ ọba akwụkwọ na-efu efu.
Enwere ọtụtụ ụzọ iji nweta Raspberry Pi ka ọ kpọọ ọdịnaya site na Netflix ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ yiri ya.
Ma ka anyị burugodị ụzọ hụ ndepụta nke ihe na / ma ọ bụ ngwa ndị anyị ga - achọ ime ka utu Pi na - arụ ọrụ nke ọma obughi nani na nlekota LCD kamakwa na ulo TV ma obu ihe ndi ozo yiri ya.
Maka nke a, anyị ga-achọ ihe ndị a:
32 Gb ma ọ bụ karịa klas 10 Microsd kaadị
Microusb USB na chaja.
HDMI USB (S-vidiyo na ndabara ya).
Utu Pi 3 osisi.
Ikuku kiiboodu na òké.
Njikọ Internetntanetị. (Ọ bụrụ na ọ nwere waya, anyị ga-achọ eriri ethernet)
Ihe oyiyi ISO Raspbian.
1 Usoro 1: iji Firefox
2 Usoro 2: iji Chrome na ExaGear
3 Usoro 3: Chromium maka Netflix
4 4zọ XNUMX: Kodi Add-on
5 Usoro 5: onye ogbi ahịa
6 Ọrụ ndị ọzọ
Usoro 1: iji Firefox
New nsụgharị nke Mozilla Firefox kwe ka iji ngwa weebụ Netflix mee ihe. Iji mee nke a, naanị anyị ga-etinye ya na Raspbian site na iji iwu:
Nke a ga-ewunye ihe nchọgharị weebụ kachasị ọhụrụ ma kwe ka iji Netflix na Rasberi Pi anyị. Usoro a bụ nke kachasị dị mfe na nke kachasị dị na ndị niile dị maka Netflix. Maka ọtụtụ nhọrọ kachasị mma mana ọ bụkwa eziokwu na ọ bụrụ na anyị amasị Chrome, nke a bụ nsogbu, nnukwu nsogbu n'ihi na ha abụghị otu ihe nchọgharị ahụ, dị anya na ya. Uzo ozo bu iwunye uzo ohuru nke Mozilla Firefox site na ulo oru ndi Mozilla. Iji mee nke a, anyị mepee ọnụ ma dee ihe ndị a:
Usoro 2: iji Chrome na ExaGear
Elọ ọrụ ExaGear kere software na-agba ọsọ x86 platform platform on nyiwe ka Rasberi Pi. Iji mee nke a, anyị ga-etinye ya ma mee ya. Mgbe ahụ, anyị nwere ike iji Chrome maka Windows dị ka ndabara nchọgharị na-ekiri Netflix fim na usoro.
Anyị nwere ike ịnweta sọftụwia ExaGear site na njikọ a. Ozugbo enwetara ya, anyị na-adọghe ngwugwu ma na-agba faịlụ nrụnye dị ka ndị a:
Ugbu a, anyị ga-eme ya dị ka ndị a:
Anyị na-emelite ngwanrọ ahụ ka anyị nwee obere chinchi dị ka o kwere mee:
Ugbu a, anyị nwere ike iji Chromium na Netflix ma ọ bụ naanị gaa Google Chrome web ma budata ngwugwu nkwụnye nrụnye.
Usoro 3: Chromium maka Netflix
Agbanyeghị na Chrome na Chromium bidoro otu ọrụ, ha abụghị otu ihe ahụ, yabụ ọtụtụ ndị ọrụ na-ele Netflix na Chrome ọ bụghị na Chromium. Dị ka ọtụtụ ihe nchọgharị ndị ọzọ dị ka Epiphany, nsogbu dị na ọba akwụkwọ ihe nchọgharị na iji ihe eji eji DRM. Ma, e nwere usoro na-edozi nsogbu a na Chromium na ọ mejupụtara ihe ndị a.
Nke mbụ, anyị ga-ebudata nsụgharị ọhụrụ nke Chromium maka Raspbian, anyị na-eme nke a site na ịpị ihe ndị a na ọdụ:
Ugbu a anyị nwere ụdị Chromium a emelitere, anyị ga-agbakwunye ngwa dị ezigbo mkpa ma na-atọ ụtọ maka nyiwe dịka Raspberry Pi: Onye na-ahụ maka ihe nchọgharị gị. Ihe mgbakwunye a na-enye anyị ohere ịgbanwe ozi nke ihe nchọgharị weebụ na-eziga na ngwa na ọrụ weebụ. Ihe mgbakwunye maka ihe nchọgharị a dị ebe a. Ozugbo anyị nwere ihe niile, anyị ga-agbanwe onye ọrụ ahụ ma ọ bụ mepụta onye ọrụ ọhụụ wee gbakwunye data ndị a:
Ugbu a, anyị na-ahọrọ Onye nnọchiteanya a wee buruo ibe Netflix. Mgbe ahụ ọrụ ga-arụ ọrụ ma kpọọ vidiyo ọ bụla na-enweghị nsogbu ndakọrịta.
4zọ XNUMX: Kodi Add-on
N'ime ihe ndị anyị kwuru n'elu, a rịọrọ onyonyo Raspbian ISO ka ọ wụnye na kaadi microsd. Agbanyeghị, nke a ka anyị nwere ike gbanwee gaa na nsụgharị nke Kodi maka Raspberry Pi.
Kodi bụ mmemme na-emegharị Raspberry Pi anyị ka ọ bụrụ ebe mgbasa ozi, ebe mgbasa ozi nke anyị nwere ike iji na telivishọn n'ime ime ụlọ anyị ma ọ bụ ime ụlọ anyị, na-eme nke a smart-tv.
A naghị akwado Netflix n'ozuzu maka Kodi, dị ka Netflix bụ ngwa weebụ ma chọọ ndebanye aha na igodo iji rụọ ọrụ. Ma ndị Community kere ihe mgbakwunye maka Kodi nke mere ka o kwe omume iji Netflix na Raspberry Pi. Iji mee nke a, anyị ga - ebudata mgbakwunye nchekwa Github a ma wụnye ya na Kodi dị ka otu mgbakwunye usoro. Mgbe nke a ụzọ mkpirisi Netflix ga-apụta.
Usoro 5: onye ogbi ahịa
Kemgbe isiokwu anyị kwuru maka ya na eziokwu bụ ka a nti nhọrọ maka ọtụtụ ndị ọrụ. Pi Pi na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ na usoro ndị ahịa ogbi, nke a pụtara na anyị nwere ike igwu ọdịnaya Netflix ma ọ bụ ngwa Netflix site na ihe nkesa ma lelee ya site na Rasberi Pi anyị. Maka nke a, anyị ga-eji mmemme bara ezigbo uru: TeamViewer.
TeamViewer bụ mmemme nke ga - enyere anyị aka ijikọ na kọmpụta ọ bụla nwere ngwa a, na-enweghị mkpa maka nnukwu nhazi ma ọ bụ ihe ọ bụla dịka onye nchịkwa netwọkụ. Na nke a anyị ga-ejikọ na kọmputa nwere Windows Chrome ma ọ bụ Microsoft Edge na TeamViewer, mgbe ahụ anyị ga-ejikwa desktọpụ ahụ pụọ na ngwa anyị Pi. Usoro a bụ ihe kachasị sie anyị Rasberi Pi na ọbụlagodi, n'ihi ike dị ala nke bọọdụ raspberị, ọ nwere ike ịbụ onye nwere ọtụtụ nsogbu playback.
Ugbu a enwere ọrụ ndi ozo dakọtara na utu anyị: ihe niile. Usoro nke Netflix na-agbaso iji nye ndị ahịa ya ọdịnaya anya ka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-eji ya, ya bụ, mwepụta nke ngwa pụrụ iche ma ọ bụ ngwa weebụ. Ma ọ bụ na nke ikpeazụ ebe ọ na-emegide Raspberry Pi. Na nkenke, iji usoro ọ bụla anyị nwere ike ịme Raspberry Pi egwu ọ bụla ọzọ Netflix ọrụ dị ka Rakuten TV, Amazon Prime ma ọ bụ HBO.
Methodszọ ndị a kachasị dị irè mgbe ị na-ele Netflix ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Mụ onwe m na-ahọrọ nhọrọ Mozilla Firefox ma ọ bụ, na-ada nke ahụ, ojiji nke Kodi, ụzọ abụọ na-eri akụrụngwa pere mpe nke nwere ike ime ka anyị nwee ọmarịcha oge anyị na ọrụ ịntanetị ndị a, ihe dị adị ma na-atọ ụtọ karịa telivishọn ochie na mgbasa ozi Cheghị otú ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Esi lelee Netflix na Raspberry Pi
Ndewo m gbalịrị ịhazi Chromium na ihe mgbakwunye, mana m chere na otu ọnwa gara aga Netflix gbanwere ndakọrịta ya anaghị ekwe ka m hụ Netflix na RaspberryPi3 m, ruo otu ọnwa gara aga, enwere m ike ịhụ Netflix enweghị nsogbu na Chromium na Netflix Mbubata.
Echere m na Netflix gbanwere ihe, enwere ike ịme mgbanwe ụfọdụ na mgbakwunye ka ọ bụrụ na ọ nwere ike dakọtara, m si na Linux ma ọ bụ Raspberry M na-anwa ịghọta ihe, m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike iziga m okwu ọ bụla ma ọ bụ enyemaka, na-ekele ị ga-ukwuu
Abụ m otu ihe ahụ dịka gị ebe ọ bụ na raspbian enweghị ike ịhụ netflix
Achọtala m ụzọ dị mfe iji strimụ Netflix na Raspberri Pi. M tinye njikọ na blog.
ekele, usoro otu na-arụ ọrụ nke ọma
mfe iji wụnye na oru oma
Zaghachi Orlando Gutierrez
Biko ị nwere ike igosi ụzọ mmezi nke faịlụ 3?
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị melite ozi ahụ ebe ọ bụ na ọbụnadị ọrụ ekele
Ọ dị ka ikwubiga okwu ókè ọ̀ dị adị.